डाक्टर केसीलाई जुम्लाबाट नेपालगञ्ज पठाइँदै, भोलि काठमाडौं ल्याइने |
गृह पृष्‍ठ खबर डाक्टर केसीलाई जुम्लाबाट नेपालगञ्ज पठाइँदै, भोलि काठमाडौं ल्याइने
डाक्टर केसीलाई जुम्लाबाट नेपालगञ्ज पठाइँदै, भोलि काठमाडौं ल्याइने
प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन ५ , सोमबार १६:२८
सात दिनयता जुम्लामा अनसनरत् वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिएको छ।जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा अस्वीकार गरेपछि केसीलाई उनकै इच्छामा काठमाडौं ल्याउन लागिएको हो। अस्पतालका निर्देशक डा. मंगल रावलका अनुसार केसीले काठमाडौं जाने भनेपछि प्रक्रिया थालिएको हो।
उनका अनुसार सोमबार उनलाई नेपालगन्ज ल्याइने छ। समिट एयरको जहाजमार्फत् केसीलाई ल्याएर नेपालगञ्जस्थित भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा राखिने छ। ‘मंगलबार नेपालगञ्जबाट काठमाडौं लैजाने तयारी छ, आज सम्भव हुन नसक्ने भएकाले भोलिका लागि व्यवस्था मिलाइएको छ,’ केसीसँगै रहेका डा. पुजन रोकायाले भने। केसीले जुम्लामा रहेर कुनै पनि उपचार नलिने अडान लिएपछि उनलाई काठमाडौं पठाउनु परेको रावलले बताए।
‘उहाँले जुम्लामा रहेर उपचार नलिने बरू काठमाडौं फर्काइदिन भन्नु भएपछि हामीले यो प्रक्रिया थालेका हौं,’ रावलले भने।केसीलाई शनिबार राति प्रहरीले अनसनस्थलबाट उठाएर कर्णाली प्रतिष्ठानमा लगेको थियो। बेडमा राखे पनि केसीले उपचार लिन मानेका थिएनन्।जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले केसीको इच्छाअनुसार जुम्लाबाट पठाउने व्यवस्थापन मिलाइएको बताए।
‘कहाँ लैजाने भन्नेबारे केसीकै मान्छेलाई सोध्नुहोला, मलाई थाहा भएन,’ उनले भने।
केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भइरहेको छ। रक्तचाप कम, रगतमा चिनीको मात्रा कम देखिएको छ। मांसपेशीहरू बाउँडिने समस्या छ। मुटुको धड्कन पनि अनियमित छ। उनले यसपल्टको सत्याग्रहमा विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
केसी लकडाउन अघिदेखि नै जुम्लामा छन्। कर्णालीका विकट जिल्लामा उनी औषधि/उपचार गर्दै हिँडिरहेका थिए। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको पहिलो माग छ। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरू गर्न उनले माग गरेका छन्।
प्रदेश नम्बर दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उनले माग गरेका छन्। मागको दोस्रो बुँदामा मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने केसीको माग छ। २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने केसीको अर्को माग छ।
बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो नि:शुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न र राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, दरबारमार्गको जग्गा, ओम्नी समूहको औषधि खरीदलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारका दोषीलाई छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न केसीले माग गरेका छन्। उनले बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाउन माग गरेका छन्। यी सबै प्रकरणका दोषीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि छानबिन र महाभियोग लगायतका कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन्।
पछील्लो पोस्ट सोमबार थपिए १ हजार १ सय ५४ कोरोना संक्रमित, थप १६ जनाको मृत्यु
अगिल्लो पोस्ट आईपीएल२०२० ः बैंगलोरको विजय सुरुवात